Queenax, အပြည့်စုံဆုံးနှင့်ပျော်စရာလေ့ကျင့်ရေး Bezzia
တောရက်စ် | 03/07/2021 18:00 | လေ့ကျင့်
သင်ပြီးပြည့်စုံသော၊ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနေပါက Queenax သည်သင်တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ ကြောင်းလေ့ကျင့်ရေးအမျိုးအစား ၎င်းသည်နာမည်တူရရှိသည့်လှောင်အိမ်ထဲတွင်ပြုလုပ်သည်သင်သည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်တိုအတွင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောပုံကိုပြသနိုင်လိမ့်မည်။
Queenax ဟာအီတလီလူမျိုးတွေရဲ့လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပါ။ ဤသင်တန်းသည်အလွန်တက်ကြွ။ ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကမတူညီတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နိုင်တဲ့ box တစ်မျိုးမျိုးနဲ့လုပ်တာပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်ကိုအခြားလူများနှင့်မျှဝေနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်အုပ်စုလိုက်လေ့ကျင့်ခြင်းဖြစ်သည်။
Queenax မှာဘာတွေပါဝင်သလဲဆိုတာကိုသင်ရှာဖွေချင်ပါသလား။ ဒီနေရာမှာဒီလေ့ကျင့်မှုအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးကိုပြောပြပေးပါသည်။ အခြားလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားများနှင့်လည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
1 ဘယ်လို Queenax session တစ်ခုဖြစ်သနည်း
3 Queenax အကျိုးကျေးဇူးများ
ဘယ်လို Queenax session တစ်ခုဖြစ်သနည်း
Queenax session ကိုအမြဲတမ်းလမ်းညွှန်သင့်တယ်။ သူက session ကို design လုပ်တဲ့သူကအဆုံးမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေတော်တော်များများအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်လုပ်တယ်။ ၎င်းသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်လူရှစ်ယောက်ထက်မပိုစေရ။ Queenax လေ့ကျင့်ခန်းဟာပုံမှန်အားဖြင့်နာရီဝက်ခန့်ကြာတတ်ပါတယ် တိုတောင်းသောကြာချိန်၏ပေမယ့်မြင့်မားသောသို့မဟုတ်အလွန်မြင့်မားသောပြင်းထန်မှု၏လေ့ကျင့်ခန်း, ဖျော်ဖြေနေကြသည်.
ပြုလုပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းများသည်စူပါလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အမျိုးမျိုးသောအရာများဟုခေါ်သည် ရပ်ဆိုင်းမှုလေ့ကျင့်ခန်း။ Queenax ပြုလုပ်သောorရိယာသို့မဟုတ်လှောင်အိမ်ထဲတွင်ဘားများ၊ ကွင်းများ၊ ချည်နှောင်ခြင်းများနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးစသည့်ကိရိယာများကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ ဤပုံစံတွင်ရည်ရွယ်ထားသည်မှာ circuit ကိုလုပ်ဆောင်သောသူများသည်လုပ်နိုင်သည် လေ့ကျင့်ခန်းများအမျိုးမျိုးနှင့်အလုပ်လုပ်သည်.
Queenax ၏အဓိကအားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်လူအမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါအလွန်အရေးကြီးပေမယ့် session ကိုလူများ၏စွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် အဘယ်သူသည်လေ့ကျင့်ရေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်။ မည်သည့်အားကစားတွင်မဆိုရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အလေ့အကျင့်မရှိလျှင်တိုးတက်မှုမရှိပါ။ ၎င်းအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအချိန်အလွန်နည်းပါးသောရလဒ်များကိုပေးသောကြောင့်ဤပုံစံသည်စုံလင်သည်။
ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုရှာတွေ့သောအခါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သို့သော် နောက်ပြန်ပြproblemsနာရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ဒူးဒဏ်ရာရရင်ဤလေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်မီသင့်အခြေအနေကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သောကြောင့်အထူးကျွမ်းကျင်သူနှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။ သို့သော်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခု၏ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုသည်အမြဲတမ်းဒဏ်ရာများကိုရှောင်ရှားရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
Queenax ဟာပြင်းထန်ပြီးအလွန်အမင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျရန်၊ လေသံတိုးရန်နှင့်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအပြည့်အဝတိုးတက်စေရန်ရှာဖွေနေပါကဤရွေ့ကား၊ လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းတို့ပြုလုပ်သောအမြန်နှုန်းတို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်တက်ကြွသောကြောင့်၎င်းကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းစေသည်။ သင်တသမတ်တည်းရှိပါကရလဒ်များကိုအချိန်တိုအတွင်းတွေ့မြင်ရပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်ခံရသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သင်လေ့ကျင့်ခန်းမှာအစာအာဟာရကောင်းနဲ့အမြဲတမ်းလိုက်ပါသင့်တယ်။ အစာနှင့်အစာမစားပါကအလုပ်မလုပ်သောအစားအစာများမရှိပါ။ သင်၏အစားအစာမှအဆီနှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောအရာဝတ္ထုများကိုလည်းမဖယ်ရှားပါကသင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေမည့်အံ့ဖွယ်လေ့ကျင့်ခန်းများမရှိပါ။ နှင့်အတူ မျှတသောအစားအစာ၊ ဇွဲရှိခြင်းနှင့်အပ်နှံခြင်း ဒီနှင့်အခြားအားကစားများလိုအပ်သည်ဆိုပါကအဆင့်တိုင်း၌သင်၏ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
မကြာခဏလျစ်လျူရှုခံထားရသောကျန်းမာရေး၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုမမေ့ဘဲမနေပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ endorphins များထွက်လာပြီးလေ့ကျင့်ခန်းအပြီးတွင်သင်စိတ်ကျေနပ်မှုများစွာရရှိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာစေမည့်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုတိုးပွားလာသည်။ အဲဒီအတွက်, Queenax ကအကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေထဲကတစ်ခုပါ, သင်သည်လူများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးသူတို့သည်သင့်အားအပြင်ဘက်နှင့်အတွင်း၌ကောင်းမွန်စွာခံစားနိုင်အောင်ကူညီပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » လေ့ကျင့် » Queenax, အပြည့်စုံဆုံးနှင့်ပျော်စရာလေ့ကျင့်ရေး